Haweenka Dabaasha, Dabaasha Bikini, Dabaasha Wiilasha - Stamgon
Design Naqshado yar-yar oo loox uruurin karo ah oo loogu talagalay ka hortagga qorraxda ee wax ku oolka ah iyo qaabeynta anti-clip-ka ee zipper-ka si loo ilaaliyo maqaarka carruurta. Design Naqshadda hore ee hoyga 'zip zip' way fududahay in la xidho oo laga baxo, oo si fudud ayaa loogu isticmaali karaa biyaha. ☆ Dharku waa mid raaxo leh oo jilicsan, oo ma fududa in maqaarka la jabiyo. Magaca badeecada: Caruurta cusub ee Imaatinka Dabaalasho hal gabadh oo dharka dharka dabbaasha ah loogu talagalay carruurta Qalabka: 82% Polyamide, 18% Nooc Badeecada Spandex: Dabaasha leh dharka OEM ODM Cabbirka: S / M / L / XL Linning: 100% p ...
Design Naqshado yar-yar oo loox uruurin karo ah oo loogu talagalay ka hortagga qorraxda ee wax ku oolka ah iyo qaabeynta anti-clip-ka ee zipper-ka si loo ilaaliyo maqaarka ilmaha. Design Naqshadda hore ee hoyga 'zip zip' way fududahay in la xidho oo laga baxo, oo si fudud ayaa loogu isticmaali karaa biyaha. ☆ Dharku waa mid raaxo leh oo jilicsan, oo ma fududa in maqaarka la jabiyo. Magaca badeecada: Cusboonaysiinta cusub ee cute caadada ah hal gabal Dabaasha caruurta ee Wiilasha Qalabka: 82% Polyamide, 18% Nooca Waxsoosaarka Spandex: Dabaasha leh dharka OEM ODM Cabbirka: S / M / L / XL Linning: 100% ...
Design Naqshado yar-yar oo loox uruurin karo ah oo loogu talagalay ka hortagga qorraxda ee wax ku oolka ah iyo qaabeynta anti-clip-ka ee zipper-ka si loo ilaaliyo maqaarka ilmaha. Design Naqshadda hore ee hoyga 'zip zip' way fududahay in la xidho oo laga baxo, oo si fudud ayaa loogu isticmaali karaa biyaha. ☆ Dharku waa mid raaxo leh oo jilicsan, oo ma fududa in maqaarka la jabiyo. Magaca badeecada: Cusboonaysiinta cusub ee cute caadada ah hal gabal Suugaanta dabbaasha ee wiilasha Qalabka: 82% Polyamide, 18% Nooca Waxsoosaarka Spandex: Dabaasha leh dharka OEM ODM Cabbirka: S / M / L / XL Linning: 100% ...
Naag jilicsan oo maqaar leh oo jilicsan oo haweenka daabacan ...
☆ Thong dhexda sare ee xakameynta caloosha xakameyso bikini go'an, suunka garabka lagu hagaajin karo .; Pattern Qaabab kala duwan oo gaar ah, shabeel daabac ah, daabac abeeso ah, daabaca xayawaan zebra iyo daabaca ubaxa; ☆ Thong iyo hoog jilicsan, hooseeya caymis, qari calooshaaga oo tusi jidhkaaga qurxoon; Magaca badeecada: Nooc shabeel jilicsan oo maqaar ah daabacan dumarka dharka xayawaanka ah ee dharka dabbaasha sexy Qalabka: Spandex / Polyester Nooca sheyga: Bikini-Dabaashaha oo leh OEM ODM Adeegga Cabbirka: S / M / L / XL Linning: Dabeelaha Polyester: Sexy, Fashionable, Breathab ...
X SEXY CROCHET BIKINI SET. Qalabkan gacmaha lagu duudduubay oo leh koollo qurux badan ayaa ah hal hab oo aad ugu fiican tahay xeebta. HESHIIS KU SAARSAN FADAHA. Kalaab bokiska, riix suufka kor u qaadista, qaab aad u qurux badan. Waad jirkaaga ku sii wanaajin kartaa qaabkan xiisaha leh ee loo yaqaan 'crochet bikini'. J JAWAAB HALTER BIKINI SET. Waxaad ku raaxeysan kartaa sida ugufiican ee raaxada leh oo leh xarig dhaadheer oo aan loo eegayn qaabka jirkaagu yahay. O FARSAMADA GUUL. Xilliga 'crochet bikini set' wuxuu ku habboon yahay dabaasha, xeebta, qubayska qorraxda, bax ...
Quality Tayo aad ufiican: 4 hab oo fidsan xarig dabacsan, oo daboolay dhar mesh jilicsan, raaxo leh, iyo neefsashada, hubinta inaad si buuxda ugu raaxeysan doonto xirida. Xusuusin: Cabbirka caadiga ah: S, M, L, XL, XXL. ☆ Laba jeebka jeebka hore, ku habboon oo aamin ah in la isticmaalo. S Xeebtan xeebta-gaaban waxay ku siinaysaa dareen gaar ah oo ku saabsan raaxada iyo farxadda fasaxa, kalmoonka, safarka xeebta ciid, dabbaasha dabbaasha iyo howlo kala duwan oo biyo ah. Magaca badeecada: Qalabka degdega ah ee dharka casaanka ah ee raga dharka xeebta, 4 hab oo kala jaad ah camo board shorts, mens bea ...
Ist Isku-darka dhexda oo leh xargaha xargaha ah oo fidsan iyo jilicsan iyo baalal bir ah. Quality Tayo aad u wanaagsan: Qalabka dharka ayaa ah 100% maqaarka midabka miro dhalida ah ee polyester, jilicsan, iyo neefsashada, hubinta in aad si buuxda ugu raaxeysan doonto xirida. Xusuusin: Cabbirka caadiga ah: S, M, L, XL, XXL. ☆ Labo jeeb oo hore iyo jeebka dhinaceeda weyn, oo ku habboon in waxyaabo badan gudaha la dhigo. S Xeebtan xeebta-gaaban waxay ku siinaysaa dareen gaar ah oo ku saabsan raaxada iyo farxadda fasaxa, kalmoonka, safarka xeebta ciid, dabbaasha dabbaasha iyo howlo kala duwan oo biyo ah. ...
Guddi deg deg ah oo deggan oo qalalan ayaa gaabin kara ragga ...
Haweenka dharka labiska
bikini, hal gabal dabaasha
taangiga, dharka xeebta & dusha sare
dharka dharka dabbaasha, dharka gaaban
Yoga bra, dharka sare ee isboorti
shaati firfircoon, funaanado ordaya
Yoga surwaal, yoga lugaha, yoga gaagaaban
Aynu horumarkayaga u qaadno heer sare
Quanzhou Stamgon Trading Co Ltd. wuxuu ganacsi ka sameynayay dharka dharka ilaa iyo1993. Badeecadaheena waxaa ka mid ah gaagaarka xeebta, dharka dabbaasha iyo dharka Yoga iwm. Suuqyadeena ugu waaweyni waxay ku yaalliin Yurub, Waqooyiga Ameerika, South pacific iyo Koonfur Bari Aasiya. Waxaan leenahay todobo warshado oo iskaashatooyin ah oo ay leeyihiin in kabadan 2300 shaqaale xirfad leh. Wax soo saarkayagu waa ilaa labaatan milyan oo doolarka Mareykanka sanadkii.
Waxaan kordhin doonaa oo xoojineynaa iskaashiga aan wada leennahay.